Maxaa ku dhacay Carles Puyol maalinkii uu garoonka ku dhex feeri gaaray Piqué & Dhaqammadii waalida ahaa ee daafacan?! – Gool FM
Haaruun August 20, 2019
(Barcelona) 20 Agoosto 2019. Carles Puyol goolhayennmo illaa weeraryahan, maxaase ku dhacay Kabtan Puyol maalinkii uu garoonka ku dhex feeri gaaray Gerard Pique, inagoo warbixintaan ku eegi doonna dhaqamadiisii layaabka lahaa.
Carles Puyol halyeeyga kooxda kubada cagta Barcelona iyo xulka qaranka Spain waxaa lagu xasuusan doonaa dhacdooyin badan oo qaarkood ay ku jiraan xusuusta daawatada kubadda cagta caalamka, mid ka mid ah kuwii ugu soo jiidashada badnaa, waxaa lagu tilmaami karaa goolkii uu ka dhaliyay Jarmalka, isla markaana uu xulkiisa Spain ku gaarsiiyay finalka dhacdadii koobka adduunka 2010-kii.
Puyol sidii uu jeclaa in uusan u dhaawicin qalbiga tageerayasha Real Madrid, sirta ka dambeysa naxariistiisa, wixii dhacay maalinkii uu kabtan Puyol garoonka ku dhex feeri rabay Pique iyo hab-dhaqammadiisii layaabka lahaa Kabtankii loogu jeclaa gobolka Catalonia ee Carles Puyol.
Dhammaan su’aalaasi waxaan kaga jawaabi doonnaa warbixintaan xiisaha badan ee uu inoo diyaariyay Wariyaheenna Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho ee ka daawo muuqaalka hoose.